ကျေးဇူးတရား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » ကျေးဇူးတရား
Posted by ခေတ်သစ်ပေါက်ကျိုင်း on Jul 14, 2011 in Society & Lifestyle | 16 comments
နားလည်မူ အသိ ကျေးဇူး
ကျေးဇူးတရားဆိုတာကိုနားလည်ပေမယ့် မေ့ရော့မူတွေကရှိနေတတ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးကျေးဇူးတင်ထိုက်သူ မိဘပေါ့ဗျာ၊ဒါမှမဟုတ်ရင်မိမိအားကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်သူ၊နောက်ဆရာသမား သင်ဆရာ၊မြင်ဆရာ၊ကြားဆရာ ကျနော့်အတွက်တော့ စာရေးဆရာတွေလဲပါတယ်ပေါ့ဗျာ၊ဒါပေမယ့် တစ်ချို့က အဲဒီကျေးဇူးရှိဘူးသူ၊မိမိရဲ့ ဆရာသမားတွေကိုမိမိအောင်မြင်မူရပြီးချိန်မှာတော့ မေ့နေတတ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပက်သက်ပြီး ပထမဦးစွာတောင်းပန်ချင်တာကတော့ ဒီပိုစ့်ထဲမှာပါတဲ့ ကာယကံ၇ှင်ကို ပုတ်ခတ်လိုစိတ်နဲ့ရေးသားတာမဟုတ်ရပါဘူး၊အသိတရားတစ်ခုအတွက်သာ အကြောင်းခံရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းကဒီလိုပါ…လွန်ခဲ့သောသုံးလေးလလောက်က ဖတ်မိခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးပါ၊ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်နေတိုးက အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲမှာ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားရာတွင် သူ၏လက်ဦးဆရာများဖြစ်သော ဂျော်လီဆွေ၏သားများကို ဆရာသမားများအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားဖို့မေ့သွားခဲ့တယ်လိုဆိုပါတယ်။ကာယကံရှင်က သူတကယ်ပဲမေ့သွားတာပါလို့တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့် ခံစားရတဲ့သူကတော့ ၀မ်းနည်းလို့မဆုံးပါဘူး၊ဒီအကြောင်းကို မြန်မာပြည်က စာနယ်ဇင်းတွေထဲမှာမတွေ့ရပေမယ့် ပြည်ပကစာနယ်ဇင်းတွေမှာပဲဖတ်လိုက်ရတယ်။တကယ်တော့ အဲဒီကျေးဇူးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကို ထုတ်ဖေါ်ပြောဖို့ဝင်လေးနေရင်မိမိရဲ့ ဘ၀အောင်မြင်မူတွေအတွက်ဘယ်လောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာ သိသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
မိဘရဲ့ကျေးဇူးမည်မျှကြီးမားကြောင်းကိုတော့စာဖွဲ့မနေတော့ပါဘူး၊ဆရာသမားတွေရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကလည်းပြော၍ပြင်ကုန်နိုင်ပါဘူ့း၊ငယ်စဉ်က မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမများကိုတောင် မေ့ပျောက်ဖို့မသင့်ပါဘူး၊ယနေ့ စာပေလောကမှာရော သက်ရှိထင်ရှားရှိတဲ့သူတွေ၊ဆုံးပါးသွားကြသူတွေရွောအားလုံးရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေဟာ အင်မတန်ကြီးမားလှပါတယ်။သူတို့တွေ ရေးသားပြုစုထားတာတွေကို ကျနော်တို့က အစဉ်သင့်လေးစားသုံးလို့ရနေလိုပါပဲ။
လောကမှာကျေးဇူးသိဖို့၊ကျေးဇူးတရားနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ အင်မန်အရေးကြီးပါတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ဆရာကြီးဦးဘိုသင်း ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်(ငြိမ်း)ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်က ကျေးဇူး ဆိုသောစကားအသုံးနှုန်းသည် ပုဂံခေတ်မြန်မာစာပေ အရေးအသားမှ စတင်အသုံးများကြောင်းကို အထောက်အထားနှင့် ရှိနေသည်ဟုဆိုပါသည်။
ပုဂံခေတ် ရာဇကုမာရ်ကျောက်စာ၌ ထိုကျေးဇူးဆိုသော အသုံးကိုစတင်တွေရှိရသည်ဟုဆိုသည်။ကျောက်စာတွင် ခမည်းတော်ကျန်စစ်မင်းကြီးက ပေးအပ်ခဲ့သော ကျွန်သုံးရွာကို သားတော် ရာဇကုမာရ်က “မင်းကြီးကျွေးမွေးသော ကျေးဇူးကို အောက်မေ့သတိရ၍ ရွေအတိပြီးသော ရွေဆင်းတုတစ်ဆူပြုလုပ်၍ လှူလေသည်။ကျန်စစ်မင်းကြီးသိသဖြင့် သားတော် ရာဇကုမာရ်အလှူကို တုံ့ပြန်အသိမှတ်ပြုသည့်အနေဖြင့် “သာဓု”ခေါ်လေသည်။ထိုသည်မှာ ကျေးဇူးနှင့် ကျေးဇူးတရားသဘောပေါ် လက်ခံကျင့်သုံးတတ်မူ၊သိတတ်မူ၊နားလည်သဘောပေါက်မူ၊တန်ဖိုးထားတတ်မူ၊တုံ့ပြန်ရွက်ဆောင်လာတတ်မူ စသည်တိုကိုဆိုလိုသည်။
သမိုင်းအကြောင်းရကြည့်မယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်ရဲ့လွတ်လတ်ရေးဖခင်၊တပ်မတော်ရဲ့ဖခင်လို့ ဆိုထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလိုလူမျိုးကိုရော ကျေးဇူးတရားတွေအရ ဘယ်လို့မှမေ့ပျောက်လို့ရမယ်လို့မထင်ပါဘူး၊ဒါပေမယ့် အဲဒီကျေးဇူးတွေကိုပြန်ပြီးပေးဆပ်နေရတာက ဘယ်သူတွေလဲ၊တကယ်ကိုဘဲ ကျေးဇူးတရားဆိုတာတွေကိုမသိရော့လေသလား၊။။။။။သို့မဟုတ် ရူးချင်ဟောင်ပဲဆောင်နေတာလား….သမိုင်းကြောင်းအမှန်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှရိုက်ချိုးဖျက်စီးပစ်လို့မရပါဘူး။
“တလုပ်စားဖူး သူ့ကျေးဇူး အထူးသိတတ်စွာ” ကျေးဇူးတရားနားလည် သိတတ်ပါစေ။
စိတ်အရမ်းလှုပ်ရှားတဲ့အချိန်မှာ မေ့သွားတာမျိုးက ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ (ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ကိစ္စတစ်ခုကို လုပ်ပြီးသွားမှ ကျန်ခဲ့တာ၊ မေ့ခဲ့တာတွေကို မကြာခဏ နောင်တ ရတတ်လို့။) ဒါပေမယ့် မေ့သွားကြောင်းပြောပြီး ပြန်တောင်းပန်ရင်တော့ ကိုယ့်တပည့်သားမြေးအပေါ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ ခွင့်လွှတ်သင့်တယလို့ ထင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတရားကို နားလည်ပါတယ်လို့ တဖွဖွပြောရင်း ကျေးစွပ်ကြသူတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါ။
မြို့တမြို့မှာတာဝန်ကျတဲ့ ဆရာဝန်အပျိုကြီးတဦးက ပဲပြုရောင်းတဲ့ ကလေးမတယောက်ကို သနားလို့ဆိုပြီး သူ့အိမ်မှာ ခေါ်တင်နေခိုင်းပြီးစောင့်ရှောက်ထားဘူးပါတယ်။ အချိန်တန်တော့ သူကလေးကယောကျာ်းယူလိုက်လို့အဲ့ဒီယောက်ျား ကိုအိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ထားရုံမက၊ သူလုပ်တဲ့ဆေးခန်းမှာပါအလုပ်သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒိကရလာတဲ့ကလေးတွေကို လည်းစောင့်ရှောက်ပျိုးထောင်လိုက်ပါသေးတယ်။ မကြာခင်ဘဲ အဲ့ဒိယောက်ျားလုပ်တဲ့သူက သူ့အလုပ်မှာရှိတဲ့ ဆေးကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်ပြီး သူလဲ ခံစားခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီး၊ သူ့ကျေးဇူးရှင်အရင်းခေါက်ခေါက်ကြီးကို ပစ်စာပို့ပြီးအထက်ကိုတိုင်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာကလာစစ်လို့ ဘာမှအပြစ်မရှိကြောင်းတွေ့သွားပါတယ်။
အကယ်ဒမီဆုရတဲ့ လူတွေ စကားပြောရင်း သိသိသာသာရော ၊ မသိမသာရော စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတာပါ … ။ ဒါကြောင့်လည်း ပြောဖို့ ကျန်သွားတာဖြစ်မှာပါ … စင်ပေါ်မှာပြောဖို့ ကျန်သွားလဲ … စင်အောက်ရောက်တဲ့အခါ သွားဂါရ၀ပြုတာဖြစ်ဖြစ် ၊ အိမ်သွားလက်ဆောင်ပေးတာဖြစ်ဖြစ် လုပ်လို့ ရတာပဲ လေ… ။
ပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့လူကလည်း ကိုယ်က ကျေးဇူးတင်ခံချင်လို့ လုပ်ပေးတာမှ မဟုတ်ပဲ … နာမည်မပါလို့ အောင့်သက်သက်ဖြစ်သွားပေမဲ့ အပြင်မှာ လာကျေးဇူးတင်ရင် ကျေနပ်သင့်ပါတယ် ။
တို့ကတော့ … ဒါဒါ အကယ်ဒမီရတုန်းက ပြောတာ အကြိုက်ဆုံးပဲ … မမေ့မလျှော့ပဲ ကျေးဇူးတင်သင့်သူ ကိုလူမင်း ကို ကျေးဇူးတင်တာ …
ကျုပ်ကတော့.. ကျေးဇူးကိုအချောင်ခိုပြိး သိမ်းကြုံးရမ်းသမ်း ပြောတဲ့..” ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ” ဆိုတဲ့စကားအသုံးကို မကြိုက်ဘူး…။
ကျေးဇူးမတင်ထိုက်သူတွေ ရှိနေပြီး..သူတို့ကို ကျေးဇူးမတင်ဘူးဆိုတဲ့ အရွဲ့ တိုက်တာမျိုးပါတယ်လည်း ခံစားမိတယ်..။
” ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ” ဆိုတဲ့စကားအသုံးကို ကျမလည်း မကြိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကောင်းတဲ့ဘက်က စဉ်းစားရင်တော့ စောစောကလို ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူတွေထဲကနေ မေ့ပြီး ကျန်ခဲ့တဲ့သူ ရှိမှာစိုးလို့ ယေဘူယျ ခြုံငုံပြီးတော့ ပြောလိုက်တဲ့ သဘောလည်း ပါပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျားဆရာကြောင်ဆိုပြီး ဖျက်မရတဲ့စာအနေတဲ့ ထားခဲတာပေါ့။ ငှဲ ငှဲ ငှဲ ငှဲ…
ကျေးဇူးတရားဆို တာ ဆပ်နိုင်တာ မဆပ်နိုင်တာထက် …. စ်ိတ်ထဲမှာ အမြဲမှတ်မိနေရမယ် လို့တော့ အမေက ပြောဖူးတယ်။ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ပြန်ပြီးကူညီပေးရမယ်လို့ လည်း ထင်ပါတယ် …
ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူတွေထဲမှာ ကျေးဇူးပြုဖူးတာကို ကြွေးတခုလို သတ်မှတ်ပြီး အခွင့်လိုတိုင်း ကျေူဇူးကြွေးတောင်းသူတွေတော့ ကျေးဇူးမတင်သင့်ဘူးထင်ပါတယ်။ အဖျက်ဖက်က ပြောတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ကျေးဇူးဆိုတာ တတ်နိုင်သလောက် အတင်မခံတာအကောင်းဆုံးပါ။ ဘယ့်နှယ့် ငွေအကြွေးယူတာက အကျေဆပ်လို့ ရတယ်။ ကျေးဇူးကြွေးကတော့ ကျေတယ်ကို မရှိနိုင်ဘူး။ တခါလောက် လိုအပ်တာ မလုပ်ပေးနိုင်တာနဲ့ ကျေးဇူးမှမထောက်၊ ကျေးဇူးကန်းလိုက်တာနော်နဲ့ သူ့ကျေးဇူးက ကျေကို မကျေနိုင်ဘူး။
ဒါကြောင့်မိဘကျေးဇူးမြင့်မိုရ်ကျုး ဟုဖွဲ့ဆိုထားတာဟုထင်ပါတယ်။ မိဘကျေးဇူးကတော့ ဆပ်၍ပင်မကုန်နိုင်ပါ၊ ဒါပေမယ့်ဆပ်တတ်ဖို့တော့လိုမယ်၊သီတင်းကျွတ်မှမုန့်ဘူးကလေးနဲ့ထိုင်ကတော့ လိုကတော့ မကျေနိုင်ပါဘူးဟုထင်ပါတယ်။ မိမိ၏စိတ်၌ အစဉ်အမြဲသတိရလျှက် တတ်နိုင်သလောက်ပြန်လည်ကြည့်ရူခြင်းဖြင့်၎င်း ၊ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်မွေးကျေးဇူးကိုဆပ်နိုင်ပါတယ်။ ဆရာ့ကျေးဇူးတွေကိုတော့ ဆရာသမားတို့၏အဆုံးအမတွေကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး ကိုယ်တိုင်လိုက်နာကြည့်သုံး ၊ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးဆပ်ရာရောက်ပါတယ်။
လောကကြီးမှာ အပြန်အလှန် ကျေးဇူးပြုကြတယ်။
အဲဒိကျေးဇူး ဆိုတာကြီးကို စိတ်ထဲမှာ မထားချင်တာ ..။ ကိုယ်လုပ်ပေးနိုင်ရင်ပေးလိုက်..။ လုပ်မပေးနိုင်ရင် လုပ်မပေးနဲ့…။ တစ်ခုခုကို အပင်ပန်းခံပြီး ကျေးဇူးအတင်ခံချင်တာနဲ့လုပ်ပေး …။ ကိုယ့်အလှည့်ကျ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်မတွေးတော့ ပဲ ငါ့တုန်းကလုပ်ပေးတာတာ ဒါလေးတော့ ပြန်လုပ်ပေးဦး ဆိုတဲ့ အပြောမျိုးနဲ့ ပြန်တောင်း..။ တစ်ချို့ကျတော့လည်း လူထူထူရောက်လာရင် ဒီနေ့ ဘယ်သူ့ကို ဘာလုပ်ပေးလိုက်တာ.. ဘယ်လောက် ကူညီလိုက်တာ လို့ လက်မထောင်ပြီး ပြော ချင်တာနဲ့ လုပ်ပေးလိုက်တာ ပြီးတော့ သူပြောသလောက်လည်း မဟုတ်ပါဘူး …။ အဲဒိကျေးဇူးဆိုတာကြီးက လောကမှာ အပြန်အလှန် ချေးငှား ပြီးပြန်ဆပ်နေရသလိုကြီးပဲ..။ အဲဒိတော့ ပေးနိုင်ရင် ပေး မပေးနိုင်ရင်မပေးနဲ့ လူကြားထဲ ဂုဏ် မဖော်နဲ့တော့ ..။ ခုတော့ လုကြားထဲ ကြွားစရာ သက်သက် ဖြစ်နေပြီ..။ တစ်ဖက်ကလည်း ကျေးဇူးဆိုတာ အသိအမှတ်ပြုထားရင် တစ်ခါတစ်ခါ မဖြစ်ဖြစ်အောင် မနိုင်ရင်ကာ ကျေးဇူး ပြန်ဆပ်လိုက်ရတာက လူရုပ်မပီလောက်တဲ့ အထိ ဖြစ်သွားရင် မကောင်းပါဘူး..။ ကျွန်တော်က တော့ ကိုယ်လုပ်ပေးနိုင်လို့ လုပ်ပေး လိုက်တဲ့ ကိစ္စ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆို ရင် မလိုဘူးပဲ..။ တစ်ခုခု ကိုယ်လိုတဲ့ ကိစ္စ သူ့ဆီက သွားမတောင်းဘူး ..။ ဘယ်တော့မှ….. ဘာလို့လဲသိလား…။ ကိုယ့်ကိုကျေးဇူးရှင်ဆိုပြီး မနိုင်ရင်ကာ ပြန်ပေးမှာစိုးလို့..။ လူဆိုတာ အမြဲတမ်း ပြီးပြည့်စုံသူချည့်မှမဟုတ်တာ…။ ကိုယ့်ကျေးဇူးရှိပါတယ်ဆိုပြီး ကိုယ်လိုတာပြန်ပြောလုက်ရင် သူလုပ်စရာရှိတာတွေ ပစ်ထားပြီး ကိုယ်ကို ပြန်ပေး သူ့မှာတော့ ချို့ချို့ ငဲ့ငဲ့နဲ့ ကျန်ခဲ့ ….။နောက်ဆုံး အဲဒိ တစ်နေ့ ထမင်းမစားလိုက်ရဘူးဆိုရင် ကောင်းမလား ? ပြန်ကော ယူသင့်သလား …………….
ကျေးဇူးတရားအကြောင်း… မြန်မာတွေကပဲ ထူးထူးကဲကဲ ပြောနေတာလို့ ထင်တာပါပဲ..
.. (မသိစိတ်ထဲက)ကျေးဇူးအတင်ခံချင်လို့ လုပ်နေတဲ့ဖက်ကို အားသန်နေတယ် ထင်မိတယ်..။
လှူတာ..တန်းတာ.. (ယုတ်စွအဆုံး) ဘာသာရေးလုပ်တာတောင်မှ… ဒီဘ၀နောက်ဘ၀..နိဗ္ဗာန် စတဲ့ ဆုလာဘ်တွေမျှော်လုပ်တာတွေကနေ.. ရွေ့ ပြောင်း အမြစ်တွယ်လာတဲ့… သဘောတရားထင်တာပဲ..။
(လက်တွေ့ကျကျ.).ကျေးဇူးတရားကို ငွေနဲ့စက်လိုက်ရင်..(ကျေးဇူးတရားတော်တော်များများ) ပြီးပြတ်ကုန်မယ် ထင်ပါကြောင်း..
တုံ့ပြန်မှုကိုမျှော်ကိုးတဲ့ ကျေးဇူးမျိုးကတော့ ကျေးဇူးတရားအစစ်လို့မထင်ကြောင်းပါ……
@ကိုခိုင် ရေ……… အဲဒါကတော့ ဘာသာရေး အကြောင်းပြ အလှူခံနေကြတဲ့ အလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ တရားပြ ဆော်သြ မှုက ကြီးစိုးနေခဲ့တာကိုး…။ သူတို့က မလှူချင်တဲ့သူ လှူချင်အောင် ဆွယ်တရားဟောပြီး အလှူခံကြတာကိုး…….. အဲဒိတရားတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲရတဲ့ လူမျိုးတွေဆိုတော့…….. တော်ပြီဗျို့ ဆက်ပြောရင်အဆဲခံရတော့မယ်……………
ကိုယ်က ပြုဖူးတဲ့ ကျေးဇူးကို မေ့ထားပါ။ ကိုယ်က ယူဖူးတဲ့ ကျေးဇူးကိုတော့ မှတ်သားထားပါတဲ့။ အဲဒါလိုဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေသွားကြမယ် ထင်ပါတယ်။
အရင်က မြန်မာကားတွေမှာ ခဏခဏပါဖူးတာလေးရှိတယ်
ယောက်ျားလေးဘက်က မင်းသမီးမိဘတွေအပေါ် ဘယ်လိုကျေးဇူးရှိခဲ့လို့ ဆိုတာမျိုး
ုခုခေတ် မော်ဒယ်တွေ၊ သရုပ်ဆောင်တွေ၊ အဆိုတော်တွေလည်း ငွေရှင်တွေကို ကျေးဇူးဆပ်တာတွေ့ဖူးရဲ့
ကျေးဇူးဆိုတဲ့ စကားနဲ့တောင် မတန်မရာ…